Powerbeats Pro waa la keydin karaa laga bilaabo Maajo 3 | Wararka IPhone
Dhowr toddobaad, gudaha Websaydhka garaaca, marka lagu daro websaydhka Apple, waxaan helnaa samaacado cusub oo la yiraahdo Powerbeats Pro, oo ay ka go'an tahay sameecadaha dhagaha la gashado ee ciyaartooyda laga bilaabo Apple oo adeegsanaysa isla tiknoolajiyada aan hadda ka heli karno jiilka labaad ee AirPods.
Powerbeats Pro waxaa maamula processor-ka Apple ee H1, waxay la jaan qaadayaan Hey Siri, gabi ahaanba waa wireless waxayna na siinayaan ismaamul 9 saacadood si isdaba joog ah iyo ilaa 24 saacadood iyadoo loo marayo dacwada lacag bixinta oo waliba noo ogolaaneysa inaan si fudud ku qaadno. Sameecadaha dhagaha Waa la ballansan karaa laga bilaabo Maajo 3.
Dhowr toddobaad ka dib soo bandhigidooda aan rasmiga ahayn iyagoo adeegsanaya websaydhkooda, waxaan ugu dambeyn ognahay goorta ay heli doonaan dadweynaha guud. Laga bilaabo Maajo 3, isticmaaleyaasha doonaya inay keydin karaan, si kastaba ha noqotee, ma noqon doonto ilaa maalinta xigta ee 10, marka ay kuwa keydku bilaabi doonaan inay soo dhoweeyaan.
Isla maalintaas, sidoo kale waxaa si toos ah iyo jir ahaanba looga heli doonaa Apple Store ee dalka Mareykanka. Waxay umuuqataa in hada, Powerbeats Pro uu yeelan doono xadidaad juquraafi ahaan, laakiin ma noqon doono midka kaliya.
Sidoo kale, sameecadaha dhagaha waxaa lagu heli doonaa oo kaliya madow maalinta la sii daayo. Midabada inteeda kale: faan-maroodi, moos iyo buluug buluug ah waxaa la heli doonaa marka xagaagu soo dhowaadoMarkaa hadaad rabto dhagaha dhagaha midab kale oo aan ahayn madow madow, waa inaad sugto dhowr toddobaad oo dheeri ah.
Hadda, bogga internetka ee Apple ee Isbaanishka, helitaanku wuu sii socdaa si dhakhso leh. Warkii ugu horeeyey ee laxiriira dhagaha dhagaha cusub ka xaday gacanta nooca ugu dambeeya ee iOS 12.2, nooc ay ku jiraan sawirro kala duwan oo ku saabsan sida kuwan cusub AirPods loogu talagalay cayaaraha si loo kala saaro taas oo noqon doonta adeegsiga ugu weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Powerbeats Pro horay ayaa loo dalban karaa laga bilaabo Maajo 3
Apple wuxuu cusbooneysiinayaa iPad Air-style "aamusnaanta" biilasha